5 Been oo Ragga ay u sheegaan Dumarka si ay halkaan arrin uga helaan - Aayaha
Aayaha editorNovember 4, 2018
Ciyaaraha sariirta waa wax ay aad u raadiyaan ragga, qaarkood xad dhaaf waaye marka ay noqoto ciyaarta sariirta isla markaana markii uu ninka kulamo sariirta ah ka doonayo naag been walbo ayuu iskugu daraa si uu mar lee uhelo.
Haween badan oo aan shaki qabin ayaa lagu qiyaanay ciyaaraha sariirta kadib markii loo sheegay intaan oo been ah oo hoos ku qoran.
Waxaan ahay bikro ama nin aanan waligiis wax taaban
Dabcan waxaa jira ragga qaar oo ka fogaada galmada illaa waqtiga saxda ah, balse waxaa jira kuwo been ka sheega xubintooda taranka si ay gabadhaha mar lee ula galmoodaan maadaam dumarka qaarkood ay jecelyihiin ragga xaadooda qaba hadana ragga markii ay dumarka aaminaan oo beenta ay usheegaan ay socoto waa fursadooda weyna kaga faa’ideystaan.
Sidaan oo kale waligeey wax uma dareemin ama uma raaxeysan
Waxaa jira dareen dhab ah iyo mid been ah mararka qaar markii uu nin sidaas oo kale yiraahdo ujeedo ayuu kaleeyahay qorshihiisana waxa uu yahay in gabdha markaas ay diiradda u saarantahay uu dareensiiyo inay kuweyn tahay islam markaana uu jecelyahay sidaa dareteed markii ay ujeedkooda gaaraan dareenkaas si dhaqsi ah ayuu daaqadda uga baxaa.
Waanku duceystay lakulankaaga
Waxa ay kuyiraahdaan gababdha markaas ay rabaan inay mar uun sariirta la koraan oo ay u galmoodaan waanku duceystay lakulankaaga waxa uu doonayaa inuu ku dhiiri galiyo isagoo been ka sheegaya ducada si uu adiga dantiisa kaaga gaaro.
Ma rabo galmo illaa aanku guursado
Fikirka ah beenta ah waa mid adiga lagaaga dhaacdhacsiinayo inaad aamintid sheekada ah kuuma galmoodano illaa aanku guursado balse waa kalgaceyl iyo saaxiibtinimo marka waxaad siisaa laba bilood ama sadex bilood wuxuuna billaabayaa inuu kugu cadaadiyo isla galmada uu markii hore kabeen sheegay.
Lacag badan ayaa isoo gasha
Waxay dadka sheegaan in qofka ugu sareeya ama yiraahda lacag Ayaan heystaa inay yihiin kuwo madhan oo aan waxbo heysan.
Ma jiro nin qani ah ama lacag heysta oo doonaya inuu iska soo hormariyo hantidiisa si uu naag iskugu muujiyo weyna dareemeysaa marka markii uu nin isaga nafsad ahaantiisa bilaabo inuu kuu sheego lacagta uu qaato ama heysto waxa uu doonayaa oo kaliya inuu adiga kaa dhiciyo maxaa yeelay wuxuu aamisanyahay inay u socon doonto isla markaana uu kuu bootiyo sariirta, si uu dantiisa kaaga gaaro.
Haweenka waxaa loo baahanyahay inay ka fogaadaan farsamooyinka beenta ma ahan in nin walba uu run sheegayo ama daacad kuu yahay mararka qaar waxaad u baahantahay inaad aqrisid beentiisa si aadan u ooyin burrito.
Haddii Aad Gabadha Calaamadahan Ku Aragto, Ogoow Inay Ku Rabto Ninyohow
Gabdhaha Oo Dhan Waa Inay Ka Fogaadaan Waxyaabahaan Marka La Guursado